Wayanad Tree indlu-Wanderlust
Izindlu zemithi ezakhiwe ngamaplanga kwiintsika eziqinileyo zize zinyukele phezulu kwimithi ejikelezileyo. Iindwendwe ezinomdla wokuziqhelanisa ziyaKuthanda Oku.
Ihlathi lihlala kwizindlu zemithi ezakhiwe ngamaplanga phezu kwamanqwanqwa aqinileyo aze anyukele phezulu kwimithi ejikelezileyo. Iindwendwe ezinomdla wokuziqhelanisa ziya kuyithanda le nto. Abahambi abancinci bayakonwabela ukuhlala okubukekayo kunye nokuzaliswa kolonwabo :-).
I-Mupanga Wildlife Sanctuary ikufutshane kwaye iintlobo zemithi emikhulu yiTectona grandis, Terminalia sp, Dalbergia latifolia, Anogeissus latifolia, Grewia
lanceolata, Artocarpus hirsute, Macranga peltata njl.
45 iintlobo zezilwanyana ezanyisayo, 203 iintlobo zeentaka, 45 iintlobo zezilwanyana ezirhubuluzayo,
Iindidi ezingama-30 zezilwanyana ezihlala emanzini nasemanzini kunye neendidi ezingama-59 zeentlanzi zixelwe kwindawo engcwele.
I-langur eqhelekileyo, inja yasendle, i-Common Otter, i-Malabar giant squirrel, njalo njalo zezona zilwanyana zanyisayo
I-Wayanad yaziwa njengeparadesi enyulu apho amafu ekotoni athanda uhlaza, iintaba ezishinyeneyo zisasaza ingqele ejikeleze iindawo zayo zothando. Okumnandi, kumnandi, kuyamangalisa kwaye okunye kunokugqama njengamagama nje athobayo ukuxela ubungangamsha bokwenyani beWayanad. Imilambo neentlambo zayo ezikumahlathi ashinyeneyo zongeza nje ubumnandi emoyeni. IWayanad iquka iindawo ezinjengeKalpetta, iSulthanBathery, iVythiri, iMananthavady, kunye neAmbalavayal. Zonke ezi ndawo zinamandla okupela iihambo zakho ngembali enkulu, uphononongo, izilwanyana zasendle kunye nokuhlala okuphumla. I-Kalpetta likhaya leyona ndawo iphakamileyo, kwisithili saseWayanad, i-Chembra Peak kwi-2100 yeemitha ngaphezu komphakamo wolwandle. Uhambo lokunyuka iChembra Peak luxhaphake ngabaninzi. Iincochoyi ezifana neVaduvanchal, iNeelimala kunye nezinye ezininzi zibonelela ngeendlela ezininzi kubantu abathanda ukukhenketha okwenza iWayanad ibe ngumhlaba onomdla kubakhenkethi abanesibindi bawo onke amanqanaba. Kwaye iingxangxasi ezikhawulezayo njengeengxangxasi ze-Meenmutty kunye ne-Sentinal rock zibulisa iindwendwe ngokukhazimla kwazo okuluhlaza kumahlathi ashinyeneyo. Indaleko yeenkolo ezahlukeneyo kunye nezikumkani ziphefumla buthule ngaphakathi kwemida yehlathi laseWayanad. Iitempile zaseJain, i-mosque ye-Varambeta, ingcwaba le-Pazhassi, imiqolomba yase-Edakkal, njl. Izithethe kunye nenkcubeko yezizwe nazo zinokubonwa kwindlela yazo yokuphila eyahlukileyo. I-symphony yomlingo yamahlathi anobuqhophololo kunye neentaba ezimangalisayo zinokufunyanwa njengoko umntu eqhuba indlela yakhe kwiindlela ezigoso ukuya kulo mhlaba umnandi. Indawo yokubaleka okukhulu, iWayanad izaliswe yimisebenzi yolonwabo nayo. Indoda yangoku iplage inani lezinto ezimnandi eWayanad ngononophelo olukhulu ngaphandle kokwaphula indawo yokuhlala yendalo yalo mhlaba uluhlaza. Ukusuka ekuboneni indawo ukuya kwindawo ye-spa, ukhenketho lwaseWayanad luthathe amanyathelo akhuselekileyo ukwenza imisebenzi yabakhenkethi yaseWayanad ikhuseleke kakhulu kwaye ikhuseleke. Ngaphaya koko, imvakalelo ehlaziyayo yecosmic kunye nebhayoloji eyohlukeneyo yeWayanad ixhobisa iimvakalelo zomntu ukuba zihlaziyeke ngokwendalo.
Idama laseBanasura Sagar
IiNgxangxasi zaManzi zaseKanthanpara
IiNgxangxasi zaManzi zeMeenmutty
I-Mupanga Wildlife Sanctuary
Ndihlala kwiFama House ekufutshane kwaye ndiyafumaneka xa kufuneka. Kuya kubakho umnakekeli okhoyo kwipropathi ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho nathi. Ndiza kufumaneka ngefowuni 24/7. Ekhuselekileyo.Ekhaya.Eyona nto ibhetele kumaqabane.